Yintoni kanye kanye efunekayo izixhobo zekhompyutha zaseTshayina?
Kuya kufuneka sazi ukuba yeyiphi i-China Hardware Alliance Alliance, luhlobo luni lwempucuko yentengiso esiyifunayo, kwaye luhlobo luni lwehlabathi ekufuneka silwenzile. Kwakuyixesha elimnandi nexesha elibi. Uninzi lweefektri zethu zisazama ukusebenzisa abasebenzi abancinci ukuphumelela abathengi bamanye amazwe, kodwa uncedo lwelebhu ...
Indlela esebenzayo yokuphucula umgangatho wesinyithi esifa e-China
Isinyithi sokubumbela isinyithi yenye yezinto ezibalulekileyo kwimveliso yokubumba. Phantsi ukukhuthazwa kushishino sokubumbela, ishishini sokubumbela sentsimbi ehlabathini ikhula ngokukhawuleza, kodwa umgangatho sokubumbela sentsimbi China akanako ukuhlangabezana neemfuno zesinyithi, ngoko ke ngumngundo sentsimbi kushishino China kufuneka ...
I-China ngokuthe ngcembe iye yaba sisixhobo se-hardware esisebenza kunye nokuthumela ngaphandle
Umzi mveliso we-Hardware wase-China kule minyaka idlulileyo, uphuhlisiwe ngokuthe ngcembe yisitrato semveli sesixhobo sehardware ukuya kwisixeko sezixhobo se-elektroniki sanamhlanje. Emva kothotho lweenguqu ezinzulu, imakethi yezixhobo zokuhombisa ngoku ibonakalisile iindlela ezininzi zophuhliso. Eyokuqala isikali. I-China̵ ...
<< < 1 2 3 4 5 Okulandelayo >> Iphepha / 5
Hayi Cha5anger Rd, Shiwan Town, Huizhou City, kwiPhondo Guangdong, 516127 China
Ifowuni: + 86-139-2731-9288
Fumana incwadi yemifanekiso yasimahla